Iza no Minisitry ny fizahantany Iraniana vaovao. Seyed Ezatullah Zarghami
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Iran » Iza no Minisitry ny fizahantany Iraniana vaovao. Seyed Ezatullah Zarghami
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao farany Iran • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ezzatollah Zarghami, Minisitry ny fizahan-tany Iran Nahazoana fankasitrahana: Khamenei.ir -
Ny filoha vaovao ao Iran dia nanendry an'i Hon. Seyed Ezatullah Zarghami ho minisitry ny vakoka sy fizahan-tany vaovao. Izy dia lefitry ny minisitry ny kolontsaina sy ny minisiteran'ny finoana silamo ary koa ny minisiteran'ny fiarovana alohan'ny nitondrany ny toeran'ny filohan'ny Repoblika Islamika Iran Broadcasting tamin'ny 2004 ka hatramin'ny 2014.
Ebrahim Raisi, ny filoha vaovao an'ny Repoblika Islamikan'i Iran, dia nanendry ny kabinetrany tamin'ny 8 aogositra. Tokony hanaiky ny mpikambana rehetra ao amin'ny kabinetra voatendry ny parlemanta.
Ny Ministeran'ny lova ara-kolontsaina sy fizahan-tany Iraniana dia hanana ny Hon. Notendrena ho minisitra vaovao i Seyed Ezatullah Zarghami.
Tamin'ny taona 2018 dia nanana mpitsidika vahiny efa ho 8 tapitrisa i Iran.
Iran dia iray amin'ireo sivilizasiona tranainy indrindra eto an-tany ary anisan'ny sivilizasiona be eritreritra sy be pitsiny indrindra hatramin'ny voalohany. Misy lafiny iray amin'ny sivilizasiona iraniana, na amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa, dia nanohina saika ny olombelona rehetra teto ambonin'ny planeta. Saingy ny tantaran'ny fomba nitrangan'izany, sy ny tena dikan'ireo fitaomana ireo, dia matetika no tsy fantatra sy hadino.
Ny fikambanana fizahan-tany sy fizahan-tany Iran mamaritra ny fizahantany any Iran amin'ny filazany hoe Travel to IRAN. Persia, ilay Tany misy vanim-potoana efatra miaraka amin'ny tantara manankarena sy maroloko, tsangambato tsy tambo isaina, fandraisana vahiny Iraniana ary sakafo matsiro.
Therisma in Iran dia isan-karazany, manome hetsika isan-karazany manomboka amin'ny fitsangantsanganana sy fanaovana ski ambony any an-tendrombohitra Alborz sy Zagros, hatramin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina amin'ny Helodrano Persia.
Iran dia nokapohin'ny COVID-19 ary torak'izany koa ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny indostrian'ny fizahantany any Iran dia nahitana fatiantoka 320 trillion rial (7.6 miliara dolara tamin'ny tahan'ny fifanakalozana ofisialy 42,000 XNUMX rial dolara) hatramin'ny nivoahan'ny areti-mifindra coronavirus, hoy ny tatitry ny ISNA tamin'ny Talata.
Ny areti-mandringana koa dia nanimba asa maherin'ny 44,000 tao amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana teo amin'ny firenena, hoy ny tatitra.
Vokatry ny fiparitahan'ny coronavirus tany Iran sy ny tsy fananan'asa sy fatiantoka ara-bola taty aoriana dia nijaly indrindra ireo ivon-toerana honenana. Ireo statistika ireo dia mandrakotra ny vanim-potoana eo anelanelan'ny volana febroary 2020 sy ny lohataona 2021.
Ireo ivon-toeram-ponenana dia nahatratra 280 tapitrisa lavitrisa rialy (6.6 miliara dolara) voan'ny virus, raha mpiasa 21,000 mahery amin'ireo foibe ireo no very asa nandritra ny fotoana voalaza.
Ireo masoivohon'ny fizahantany no vondrona faharoa voadona indrindra tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany, miaraka amina maherin'ny 10 tapitrisa tapitrisa (238 tapitrisa dolara) ny fahasimbana ary mihoatra ny 6,000 ny olona tsy an'asa hatramin'ny nipoiran'ny fipoahana.
Mikasika ny fatiantoka asa sy ny vola, ny toeram-pizahantany, ny eco-lodges, ary ny mpitari-dalana dia anisan'ny vondrona voakasik'izany indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Iza izy Hon. Sayyid Ezzatollah Zargham, minisitry ny fizahantany vaovao ho an'ny Repoblika Islamika Iran?